တရုတ်ပိုက်လိုင်းကိစ္စ စာချုပ်များ..လုပ်ငန်းများ ၊
နှစ် ၃၀-၆၀ စသဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် ကြိုပွိုင့်ပြေး..
Undertable ထားပြီး စာချုပ်များချုပ်ထားသည်က
အတော်ကို ဆိုးရွားသောအခြေအနေ များပင်ဖြစ်ပါသည်..
သားတပည့်ဖြစ်သူက ပြည်သူကို ပစ္စတိုနှင့်မည်မျှခြိမ်းခြောက်ပါစေ..
ရွှေ GAS ပိုက်လိုင်းနှင့် သယံဇာတူးဖေါ်မှုလုပ်ငန်းများကို..
SHWE GAS MOVEMENT ဟူသောအမည်ဖြင့်..ကန်ပ်ိန်းလုပ်ကာ
AASYC (ALL ARAKAN STUDENTS And YOUTH Commmette) ဟုထင်ပါသည်
ရခိုင်လူငယ်အဖွဲ့များအပါအ၀င် ရခိုင်အဖွဲ့များက အသေအလဲ..ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်.
ဒါပေသည့် စစ်အစိုးရက လျစ်လှူရှုခဲ့ပါသည်..
အခြေချရန် မြေရာများအား ဒေသခံများထံမှ
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကျောက်ဖြူ CHINA TOWN ကြီး..၊
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 5:03 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook